Ø Madaxwaynaha Jabhada wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya Adm. Maxamed Cumar Cisman oo Booqasho ku tagay wadanka Filand.
Ø Shir balaadhan oo ka dhacay magaalada Atlanta-gorgia. ee cariga maraykanka
Ø Ururka maxaabiista Itoobiya oo cambaareeyay xukuumada Meles Zenawi
Ø Askar Itoobiyaan ah oo isudhiibtay wadanka Eritrea.
Ø TPLF oo Bam ku qarxisay xero qoxooti oo ku taala kililka Gaambeelada.
Ø Bayaan ay Jaaliayadaha Oromadu ay soo saareen.
Ø Suugaan halgameed iyo waliba arimo kale oo mihiim ah.
Madaxwaynaha Jabhada wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya Adm. Maxamed Cumar Cisman oo Booqasho ku tagay wadanka Filand.
Waxaa maalintii Khamiista ahayd ee 25 ka Disember sanadkan 2003, kasoo degay Garoonka Diyaaradaha ee Helsinki-Vantaa Airport wafti uu hogaaminayo Madaxweynaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Osman,oo uu Weheliyo Madaxa Hogaanka warfaafinta Cadaan Sheeikh Xasan Biixi Hirmooge, waxay maalintii Jimcaha ahayd ee 26.12.2003 waftigu ka qayb galeen shir si aad uwayn loo soo qabanqaabiyay oo lagu qabtay Hoolka shirarka ee dalada Ururada aan Dowliga ahayn, ee KEPA.
Shirkaas oo ay kasoo qayb galeen dhamaan bulshada reer Ogadenya qaybaheeda kala duwan, waxaa furay Gudoomiyaha Jaaliyada Ingineer Yusuf Maxamed, kuna soo dhaweeyay Madaxweynaha iyo waftigiisa, Markii hore waxaa halkaas kasoo jeediyay khudbad dheer oo ka sheekaynaysa Heerarkii kaladuwanaa ee uu soo maray Halganka xornimo gaadhsiinta shacabka reer Ogadenya ee ay hogaanka uhayso JWXO Madaxa Hogaanka warfaafinta engineer Caddaani. Waxaa kadib hadalkii lawareegay oo khudbad dheer oo siyaasi ah soo jeediyay Madaxweynaha JWXO admiral Maxamed Cumar Osman oo kawaramay xaalada Geeska Africa, tan Shacabka reer Ogadenya iyo xaalada Xukuumada Gumaysatada ah ee Itoobiya.
Dadweynaha ayaa halkaas kasoo jeediyay su,aalo badan oo waaqici ah, waxayna madaxdu siiyeen Dadweynihi halkaas isugu yimid jawaabo ay kuqanceen, waxayna balan qaadeen in ay taageero hiil iyo hooba leh lagarab istaagi doonaan JWXO.
Waxaa maalinti kadambaysay ee Sabtida 27.12.2003, ay madaxdu layeesheen Kulan gaar ah Cuqaal, aqoon yahaniin iyo dhalain yaro ka soo jeeda Jaaliyaadka Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Filand, kadib markii ay Madaxweynaha iyo waftigiisu uga xogwarameen xaalada guud ee geeska Africa, tan halganka iyo stratigiyada ka dhaxaysa labada shacab, waxay Odayaashu balan qaadeen in hiil iyo hooba lagarab istaagi doonaan halganka xornimo gaadhsiinta Ogadenya. Waxay kaloo isla maalinkaas waftigu shir gaar ah layeesheen Unugta JWXO ee Finland, waxaa halkaas kusoo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa wakiilka JWXO ee Finland Eng. Maxamed-rashiid Axmed, waxayna madaxdu siiyeen Unugta warbixin gaar ah oo laxidhiidha xaalada siyaasaded iyo tan military ee JWXO, hurumarka laga gaadhay dhinacyada kaladuwan ee Halganka, waxyaaabaha dhaw ee lahiigsanayo, iyo goolka kama dambaysta ah ee JWXO oo ah Xornimo gaadhsiinta shacabka Ogadenya.
Waxaana halkaas lagu siiyay unugta awaamir dheeraad ah iyada oo ay xubnuhu balan qaadeen in ay dadaalkooda sii laban laabidoonaan, waxaa sidoo kale halkaas lagu dhaariyay xubno cusub oo kusoo biiray unugta kadib markii ay dhagaysteen khudbadii madaxweynaha iyo hogaanka warfaafinta maalintii Jimcaha ahayd ee shirkii Jaaliyada.
Waxay sidoo kale waftigu shirgaar ah layeesheen Odayaasha reer Ogadenya maalintii Axada ahayd ee 28.12.2003. shirkaas oo uu madaxweynuhu kusiiyay Odoyaasha barbixin dheeraad ah oo laxidhiidha xaalada dhaqan dhaqaale iyo mida siyaasadeed ee kusugan yahay Shacab weynaha reer Ogadenya iyo waliba doorka looga baahan yahay in ay Odoyaashu ka ciyaaraan Halganaka xoriyad gaadhsiinta shacabka Ogadenya ee ay Majaraha siyaasadeed iyo kan militeriba u hayaso JWXO.
Ugu damabayntii socodka madaxweynaha ayaa ahaa mid guul kudhamaaday, dadweynaha reer Ogadenyana ay si aad ah ugu riyaaqeen, soona hoyiyay guul wax ku ool ah iyada oo uu waftigu kusoo beegmay xilii aad loogu baahnaa, booqadashada madaxweynaha.
Shir balaadhan oo ka dhacay magaalada Atlanta-gorgia.
Shir balaadhan oo ay soo qabanqaabisay Jaaliyada Ogaadeenya ee gobolka Gorgia ee wadanka Maraykanka ayaa waxuu ka dhacay 25.12.2003 magaalada Atlanta.
Shirkaas ayaa lagaga hadlayay xaalada guud ee dhulka Ogaadeenya iyo Dadkii dhawaan uu maamulka Hargaysa ku xidh xidhay magaalada Hargaysa, shirkaas oo ay ka soo qaybgaleen dhamaanba shacabka Soomaaliyeed ee gobolkaas ku nool ayaa waxaa ka hadlay Masuuliyiinta Jaaliyada Ogaadeenya ee gobolka Gorgia iyo Odoyaal mihiim ah oo aad looga tix galiyo bulshada dhexdeeda.
Dadkii soomaaliyeed ee shirkaas ka soo qayb galay ayaa u muujiyay Masuuliyiinta Jaaliyada Ogaadeenya ee shirkaas soo qaban qaabiyay inay ay hiil iyo hooba ula garab taaganyihiin halganka xaqa ah ee Shacabka Ogaadeenya madax banaanidiisa ku raadinayo.
Gaba gabadii Shirkaas ayaa waxaa laysku raacay.
In dhamaan soomaaliweyn taageero hiil iyo hooba lagarab istaaaagto halganka shacabka ogaadeeniya ee uu gumaysiga Itoobiya kaga Xoroobayo.
In la xoojiyo Go"aanadii ay gaadhay jaaliyada Maraykanka ee ku aadanaa falalka cadawtinimo ee ay maamulka Hargaysa ku kacaan.
In meel looga soo wada jeedsado sidii loo soo celin lahaa qarankii Soomaaliyeed ee bur buray.
Shirku waxuu canbaareeyay maamul ku sheega magaalada Hargaysa dhaqanka xun ee uu kula dhaqmayo Shacabka Ogaadeenya iyo Soomaaliwaynba, waxaana loogu baaqay in uu si shuruudd la,aan ah u sii daayo dadka uu xabsiyada ku hayo kana waan toobo falalka noocaas ah oo dhibaato dhex dhigi karta Shacabka walaalaha ah.
Ururka maxaabiista ee Itoobiya oo canbaareeyay xukuumada Meles Zenawi.
Wariyaha wakaaldda wararka Ogdaeniya u jooga magaalda Barlin ee wadanka Jarmalka ayaa sheegaya in u ururka maxaabiista siyaasiyiinta Itoobiya oo uu fadhigoodu yahay magaalada Barlin ay cambaarayn u soo jeediyeen xukuumada uu Meles Zenawi madaxda u yahay ee Itoobiya.
Ururkan ayaa xukuumada Itoobiya ku canbaareeyay in ay xidhxidheen Odayaal u dhashay Zoonka Qoraxay ee Ogaadeenya, odayaashaas oo u qoray raiisul-wasaaraha Itoobiya warqad cabasho ah, kadibna ay nabadsugida wayaanuhu xabsiga u taxaabtay qaar ka mid ah Odayaashaas.
Waxaana ka mid ah Odayaasha xabsiga loo taxaabay.
1. Maxamed Kilas
2. Cabdi Cumar
3. Suldaan Makhtal Siraaje
4. Cali Cabdaalla Cumar
5. Xaji Maxamed Garaad
6. Axmed Yuusuf & qaar kale oo rafo badan
Waxa kale oo uu warku intaa raaciyay in dad aad u tiro badan ay ku xidhan yihiin xabsiyada magaalda Qabridahare, oo ay nabadsugidu sii dayso qofkii lacag badan bixiya oo kaliya.
Askar Itoobiyaan ah oo isudhiibtay wadanka Eritrea.
Warar aanu ka helay ilo muhiim ah oo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ay todobaadkii hore baxsadeen 3 askari oo ka tirsanaa gaaska 23aad guutda 2aad ee ciidamada Itoobiya .
sadexdaas Askari oo lagu kala magacaabo.
1-Tesfahun Werkineh Ferede
3. Adhanom Sheferaw
ayaa lashegayaa in ay isu dhiibeen Ciidamada wadanka Eritrea ee ku sugan xuduuda labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea.
Askartan qaar katirsan waxay u dhasheen qoomiyada amxaarda oo ay qaarkood ka
tirsanyihiin isbahaysiga EPRDF, hasayeeshee baryahan danbe waxa jira
is afgaranwaa ka dhex taagan isbahaysiga EPRDF ee talada wadanka Itoobiya gacanta ku haya .
TPLF oo Bam ku qarxisay xero qoxooti oo ku taala kililka Gaambeelada.
wararka naga soo gaadhaya kililka Gambeelada ayaa sheegaya in ay si ula kac ah Bam ugu qarxiyen ciidamada TPLF bishan Dem. 25keedii Xero qaxooti oo ku taala gobolka Gambeelaha.
In kasta oo aan wali si dhab ah loo soo xaqiijin Bamkaasi khasaaraha uu gaystay, hadana waxaa la sheegayaa in ay dad aad u badani ku wax yeeloobeen.
Wararku waxay intaa ku dareen in ay xeradaasi ku noolayeen dad kabadan 100,000 oo qof oo qoxooti ah.
Ciidamada Ururka TPLF ee ku sugan gobolkaas ayaa xidh xidhay 53 oday oo katirsan qabiilka Anyooka ee dhawaanta ay wayaanuhu kadileen in kabadan 100 qof.
Tan iyo intii maamulka EPRD uu la wareegay xukunka Kililka Ganbeelaha waxaa faraha ka baxay amaankii gobolkaas, waxaana ka biloowday dagaalo aan kala joogsi lahayn iyo dhac dadka rayadka ah loo gaysanayo.
Bayaan ay Jaaliayadaha Oromadu ay soo saareen.
Radyowga Oromada ee sagalee Bilisumaa Oromo(SBO) ayaa sheegay in ay Jaaliyadaha Oromada ee dunida dacaladeeda kunooli ay soo saareen bayaano ay ku taageersanyihiin ururka xaq u dirirka ah ee OLF. waxana bayaanadaas soo saaray Jaaliyadaha Oromada ee wadnada Mraykanka, Ingriiska, Yemen, Eritrea iyo sacuudi Carabiya.
Waxayna bayaanadoodas ku cadeeyeen in ay taageersanyihiin go’aamadii ka soo baxay shir ay dhawaan yeesheen golaha dhex ee ururka OLF.
Waxa kale oo ay sheegeen in ay diyaar u yihiin wax alaale wixii taageero ah
ee u ururka OLF uga baahdo dad waynaha Oromada ee dibada iyo gudahaba ku
nool, waxayna intaa raaciyeen in ay diyaar u yihiin in ay fuliyaan awaamirta ka soo baxda ururka OLFta si loogaadho guusha ay dadka Oroma ahi higsanayaan.